Kırklareliတက္ကသိုလ်သည်ပညာရေးဝန်ထမ်းများကိုခန့်ထားမည် RayHaber | raillynews
[17 / 02 / 2020] အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်စမတ်တက္ကစီလျှောက်လွှာကိုစတင်ခဲ့သည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[17 / 02 / 2020] EminönüAlibeyköyရထားလိုင်းသည် ၂၀၂၀ နှစ်ကုန်တွင်စတင်လည်ပတ်မည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[17 / 02 / 2020] Aksaray မှInvestရာမရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက ATSO ရှိ Aksaray မီးရထားသို့Ulukışနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်	68 Aksaray
[17 / 02 / 2020] ဗြိတိသျှမြန်နှုန်းမြင့်ရထားစနစ်ကိုတရုတ် CRCC ကုမ္ပဏီမှလုပ်မည်	44 အင်္ဂလန်
[17 / 02 / 2020] Steamboat ဂီတသမား Selected	34 အစ္စတန်ဘူလ်
အစိုးရ ၀ န်ထမ်းများ၏ဥပဒေအမှတ် 2547 နှင့်ဥပဒေအမှတ် 657 တို့၏သက်ဆိုင်ရာဆောင်းပါးများ။ ပြည်နယ်အဆင့်အဆင့်မြင့်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများရှိပညာရေးဆိုင်ရာ ၀ န်ထမ်းများအားဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်း၊ ဌာန ၀ င်ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ခန့်အပ်ခြင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များအရဌာန ၀ င်များနှင့် 48 ဆရာ ၀ န်ကိုရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ခန့်အပ်ခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ။
ပါမောက္ခချုပ်ဝန်ထမ်းများအတွက်ပါမောက္ခများနှင့်တွဲဖက်ပါမောက္ခများအတွက်လျှောက်လွှာ; ဆရာ ၀ န်၏ဆရာ ၀ န်များအတွက်လျှောက်လွှာများကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ကိုယ်တိုင်ပို့ပေးမည်ဖြစ်ပြီးစာတိုက်မှလျှောက်လွှာများကိုလက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
15 ရက်များသည်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့် နေ့မှစ၍ တရားဝင်သည်။ အချက်အလက်အားလုံးကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များမှရရှိသောဒီပလိုမာများတန်းတူညီမျှမှုကိုအဆင့်မြင့်ပညာရေးကောင်စီနှင့် / သို့မဟုတ် Interuniversity ကောင်စီမှအတည်ပြုရမည်။
ပါမောက္ခလျှောက်လွှာတင်ရန်အတွက်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ (အောက်ဖော်ပြပါတောင်းဆိုထားသောစာရွက်စာတမ်းများအားလုံးသည် Faculty Application Form မှလွဲ၍6team CD တွင်ပြင်ဆင်လိမ့်မည်)
1.စာရွက်စာတမ်းများ / ပုံစံများ / ပညာရှင်ဝန်ထမ်းများ Sb ။ Md ။ ပညာရေးဝန်ထမ်းများအတွက်လျှောက်လွှာများလျှောက်လွှာပုံစံ
2. မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ / TC ID ကတ်မိတ္တူ၊
3. ဘွဲ့ကြို, ဘွဲ့နှင့်ပါရဂူဘွဲ့၏မိတ္တူ,
5. CV နှင့်ထုတ်ဝေမှုစာရင်း (ဖော်ပြမည့်အဓိကသုတေသနလုပ်ငန်းများ),
7. (1) ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ (လျှောက်လွှာပုံစံနှင့်တွဲရမည်)
8. “ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းလှုပ်ရှားမှု - အမှတ်ပေးဇယားပေးရမည့်ဆရာသည်ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဆရာ ၀ န်ခန့်အပ်ခြင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီပြီးစီးရမည်။
9. လုံခြုံရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးပုံစံ (၀ န်ထမ်းဌာနကို ၀ ဘ်ဆိုဒ်မှကူးယူပြီး2မိတ္တူများကိုဖြည့်ပါလိမ့်မည်။ ) (အီလက်ထရောနစ်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်စီစဉ်မည်။ အီလက်ထရောနစ်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ယူဆောင်လာမည်။ )
10 ။ အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုကိုပြသသည့်ဝန်ဆောင်မှုစာရွက်စာတမ်းမိတ္တူတစ်စုံ (တာ ၀ န် ၀ တ္တရားရှိပါကညွှန်ပြ) ။
တွဲဖက်ပါမောက္ခများလျှောက်ထားရန်အတွက်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ (အောက်ပါတောင်းဆိုထားသောစာရွက်စာတမ်းများအားလုံးသည်ဌာန ၀ င်အသင်းဝင်လျှောက်လွှာပုံစံ မှလွဲ၍4အဖွဲ့ CD တွင်ပြင်ဆင်လိမ့်မည်)
လျှောက်လွှာစတင်ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးရက် - 04.12.2019 / 18.12.2019
ကြိုတင်အကဲဖြတ်မှုရလဒ်ကြေငြာသည့်နေ့စွဲ - 23.12.2019
Academic Staff ကိုခေါ်ယူခြင်း
Kırklareliတက္ကသိုလ်ပညာရေးဆိုင်ရာ ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူမှု
Kırklareliတက္ကသိုလ် ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူမှု
တူရကီကျောက်မီးသွေးအရစ်ကျစာချုပ်အင်ဂျင်နီယာချုပ် Make မှ
EminönüAlibeyköyရထားလိုင်းသည် ၂၀၂၀ နှစ်ကုန်တွင်စတင်လည်ပတ်မည်
Aksaray မှInvestရာမရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက ATSO ရှိ Aksaray မီးရထားသို့Ulukışနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်
ဗြိတိသျှမြန်နှုန်းမြင့်ရထားစနစ်ကိုတရုတ် CRCC ကုမ္ပဏီမှလုပ်မည်
Steamboat ဂီတသမား Selected
Antalya ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်မောင်းများအတွက်ကျား၊ မရေးရာတန်းတူညီမျှမှုသင်တန်း
Güzelyalı 19/1 လမ်းမကြီးလမ်းဖောက်ရန်လမ်းဖွင့်ခဲ့သည်
Konya မြို့ဆေးရုံသည် Alaaddin Courthouse Tram ၏နောက်ဆုံးမှတ်တိုင်ဖြစ်သည်
Bombardier ကုမ္ပဏီကိုဝယ်ယူရန် Alstom
18: ဖေဖော်ဝါရီလ 08 00 @ - 17: 00
18: ဖေဖော်ဝါရီလ 08 00 @ - 19: ဖေဖော်ဝါရီလ 17 00 @
တင်ဒါကြေငြာချက် - Malatya Diyarbakırလိုင်းရှိ Level Crossings တိုးတက်ခြင်း
18: ဖေဖော်ဝါရီလ 10 00 @ - 11: 00
တင်ဒါကြေငြာချက် - နည်းပညာဆိုင်ရာ ၀ န်ထမ်းများလက်ခံရရှိလိမ့်မည်
တင်ဒါကြေငြာချက် - Ankara Kayseri လိုင်း ၂၂ DB ညွှန်ကြားမှုဇုန်တွင်ဆင်ခြေလျှောစီစဉ်ခြင်း
18: ဖေဖော်ဝါရီလ 10 30 @ - 11: 30
တင်ဒါကြေငြာချက် - Haydarpaşaအလုပ်သမားအိမ်ရာစင်တာ၏စားနပ်ရိက္ခာထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်း
18: ဖေဖော်ဝါရီလ 11 00 @ - 12: 00
တင်ဒါကြေငြာချက် - သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းကို Maltepe စီးပွားရေးနောက်ဆက်တွဲအတွက်ယူသွားပါမည်
18: ဖေဖော်ဝါရီလ 14 00 @ - 15: 00
တင်ဒါကြေငြာချက် - Izmir Suburban ခရိုင်ရှိ Aluminothermic ရထားလမ်းဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်အတူဝေးကွာသောရထားလမ်းကိုတည်ဆောက်ခြင်း
တင်ဒါကြေငြာချက် - Traverse Base ကိုဝယ်ယူမည်
18: ဖေဖော်ဝါရီလ 14 30 @ - 15: 30
တင်ဒါကြေငြာချက် - Diyarbakır-Kurtalan လိုင်းအဆင့်ဖြတ်ကျော်မှုတွင်တိုးတက်အောင်လုပ်ခြင်း
20: ဖေဖော်ဝါရီလ 10 00 @ - 11: 00
Bilgi Evi ကျောင်းသားများKaracadağနှင်းလျှောစီးစင်တာ၌ပျော်စရာရှိသည်
အခမဲ့နှင်းလျှောစီးသင်တန်းကို Kartepe နှင်းလျှောစီးစင်တာ၌စတင်ခဲ့သည်
Imamoglu သည် Mecidiyekoy Mahmutbey Metro Line စတင်ဖွင့်သည့်နေ့ကိုကြေငြာခဲ့သည်
အသစ်စက်စက်လျှပ်စစ်သဘောတရား - Hyundai ပရောဖက်ပြုချက်
ဟိုက်ဒြိုဂျွန် ၂၀၀၀ သာ Hybrid တွင်လာသည်
တက်စလာ Roadster ကိုအာကာသထဲသို့လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ကမည်သည့်နေရာတွင်စေလွှတ်ခဲ့သနည်း။
ပြခန်းအပြင်ဘက်တွင်ကားရောင်းဝယ်သူများကိုထောင်နှင့်ချီသော TL ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိမ့်မည်
Izmir ရွေးချယ်ခွင့်ပြုကြစို့။ ကားအသစ် Ferry အမည်စစ်တမ်းအသစ်စတင်ခဲ့သည်
TCDD တွင် BTS ၏ပြည်ပရောက်ဆန့်ကျင်ရေးရုန်းကန်မှုကရလဒ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်
Kahramanmaraşတွင်ရထားမီးရထားသည် ၁၂ ကီလိုမီတာရထားလမ်းဖောက်။ ပျက်စီးသွားသည်